Samsung Galaxy 10 Note Tesla Edition, fanontana voafetra an'ny avo lenta izay mety tonga | Androidsis
Betsaka ny fanantenana miandry ny fandefasana ny Galaxy Note 10, la phablet tombony lehibe izay ho tonga amin'ny 7 na 10 aogositra amin'ity taona ity, raha tanteraka ny antenaina. Voalaza fa hiaraka amin'ireto a Pro variant Ary, ho ampiana, ankehitriny misy famoahana vaovao milaza fa hiara-hiasa amin'i Tesla i Samsung hanolotra fanontana voafetra.
Samsung Galaxy Note 10 Tesla Edition no anarana ho entiny. Ity dia ho kinova voafetra, saingy tsy fantatra na ny habeny na ny fotoana. Ny efa fantatsika dia ny endriny, satria ny fandikana ilay fitaovana asehontsika amin'ny sary fonony dia manambara ny hatsarany.
Ny famoahana ny sary nadika dia niseho vao tsy ela ary tamin'ny voalohany tao amin'ny Weibo, ny tambajotra sosialy sinoa ary fonenan'ny ankamaroan'ny fivoahana izay matetika mipoitra alohan'ny famoahana ireto finday manaraka ireto. Tao no nahalalana fa ny orinasa Koreana Tatsimo dia hiara-hiasa amin'i Tesla, mpanamboatra fiara elektrika amerikana, handefa ity andiany voafetra an'ny finday avoakan'i Samsung manaraka ity.
Ny famoahana Samsung Galaxy Note 10 teo aloha tafaporitsaka
Ny famolavolana ny Galaxy Note 10 Tesla Edition dia mifanaraka amin'ny fananganana naseho ny fitaovana tamin'ny fandefasana teo aloha, toa ilay naseho etsy ambony amin'ny loko mainty. Na izany aza, amin'ny voalohany dia azo jerena fa manana a vita vita amin'ny vy vita amin'ny volondavenona misy accents mena sy logo 3D Tesla ao aorina. Ny S-Pen dia mena ihany koa ary ny fahatelo ambony dia fotsy.
Raha toa ka nisy ny fanontana an'ity fanontana ity, Azo heverina fa ho avy io aorian'ny, ny Galaxy Note 10 andiany fandefasana, izay mety hitranga amin'ny 7 Aogositra any New York, Brooklyn. Na izany aza, mila mitandrina tsara ianao amin'ny fanamafisana an'io variant io. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka manome toky izahay fa tena ao anatin'ny drafitr'ireo mpanamboatra roa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Galaxy 10 Note Tesla Edition, fanontana voafetra an'ny avo lenta izay mety ho tonga
Harry Potter: Wizards Unite dia mandefa ny 21 Jona amin'ny Android